Ciise midnimo oo shalay guul muhiim ah ku hogaamiyay kooxda KFUM - NorSom News
Ciise midnimo oo shalay guul muhiim ah ku hogaamiyay kooxda KFUM
Foto: Guttorm Lende/KFUM-kameratene Oslo
Captankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya Ciise Aden Abshir (Midnimo) ayaa mar kale kamid noqdey halbowlayaasha kooxda KFUM, kadib markii ay shalay shan iyo eber(5-0) ku xasuuqdeen kooxda Levanger. Ciise ayaa daqiiqadii 75-aad dhaliyay goolka afaraad, goolkaas oo ah kii ugu horeeyay ee uu dhaliyay tan intii uu usoo wareegay kooxda KFUM. Ciise oo shalay si weyn uga dhex muuqday garoonka ayaa loo aqoonsaday inuu ahaa xidigii ciyaarta (man of the match).
Ciise midnimo oo kadib ciyaarta waraysi gaaban siiyay wargayska Dagavisen ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay inuu ugu danbeyn shabaqa soo taabtay.
Waligey waxaan ka ciyaari jiray weerar, marka laga reebo xili ciyaareedkii ugu danbeeyay ee aan la joogay kooxda Eidsvold Turn. Si fiican ayaa la iiga soo dhaweeyay kooxda KFUM, sharafna beyna ii tahay inaan gool u dhaliyo. Maadaama aan ahay weeraryahan hore, farxad gooni ah ayay leedahay, inaad aragto kubado oo shabaqa galayso.
Ciise midnimo oo saftay dhamaan sagaalkii kulan oo ay xili ciyaareedkan ciyaartay kooxda KFUM. Isaga oo soo bandhigay xirfad ciyaareed heer sareeyo iyo dadaal aan joogsi laheyn. KFUM ayaa hada ku jirta kaalinta 9-aad, iyada oo 10 dhibcood ka danbeeya kooxda hogaaminayso horyaalka heerka labaad ee Sandefjord.
Halkan ka akhriso warkan oo af norsk ku qoran(les saken på norsk her)
Previous articleMaxkamada sare ee Norwey oo ogolaatay in gabar soomaali ah wadanka laga ceyriyo.
Next articleBooliska Norwey oo lagu eedaynayo midab-takoor ka dhan ah ajnabiga
Norway: Kooxda Rosenberg oo isha ku heysa 14-jir soomaali ah.
Horyaalada kubadda cagta Norway oo soo xirmay: Waa sidee xaalada kooxaha ay laacibiinta soomaalida ah u ciyaaraan?
Soomaaliya oo laga saaray tartanka koobka bariga iyo bartamaha Afrika: Ogow sababtan yaabka leh
Keydka NorSom Velg måned september 2020 (56) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)